Nyamavhuvhu 3, 2018 arun
Muridzi NYSE anotangazve Bakkt crypto Exchange & custodial mhinduro
Bitcoin aigona kuva vava kuda anoputsa sezvo choruzhinji mari. Kanenge ndicho chinangwa startup yava kuti raparurwa nesangano rimwe vatambi simba kupfuura pamusoro Wall Street, achibatsirwa nevamwe nemakambani America kwakaita kutungamirira kusanganisira Microsoft uye Starbucks (vanoronga kushandisa kuchikuva itsva kugamuchira BTC kubhadhara.) mangwanani iyi Intercontinental Exchange-ari kutengesa colossus kuti muridzi New York Stock Exchange nevamwe pose mumisika-akazivisa kuti Anoumba imwe kambani itsva rinonzi Bakkt.
The itsva asingashumbi, iyo iri kutarisirwa vomurova muna November, ichapa federally yaidzorwa musika Bitcoin. With pakasikwa Bakkt, Ice ndehwokuti kuchinja Bitcoin kuva yaunovimba yose mari ne rwakafara mashandisirwo. Kuvambwa inotodiwa nokuti Bakkt achava kuti Bitcoin ruzha uye chipiriso yakachengeteka nokuda vomumatunhu anokosha kuti ikozvino kudzivisa kunyanya guru zvemari masangano nayo-zvenyika. Chinangwa ndechokuti kubvisa nzira huru mari mamaneja kupa Bitcoin vaviri mari, mudyandigere mari, uye ETFs, sezvo zvikuru inodzorwa, zvikuru upfumi.
Data analytics yakasimba nemishumo “bhizimisi ukoshi” kuti blockchain kusvika $ 2T ne 2030
IHS Market, mumwe fintech date analytics yakasimba, muna July yakashuma for pamusoro blockchain zvigadzirwa zvoita kuti “Bhizimisi basa ukoshi” pamusoro $2 tiririyoni ne 2030. The ripoti zvinosanganisira kukosha zvose kuti blockchain anowedzera sechinhu yose kutwasuka (kwete chaizvo mari pamusika nguwani). Kunyange mashoko vakafara zvokufara zviya pavakaverenga kupinda granular zvikamu blockchain ukoshi, kusanganisira "... chikuru tsvakurudzo kubvunzurudza zvine urongwa blockchain nyanzvi," $2 tiririyoni sokuti kumwe nhamba sezvo gore 2030 ndiyo kure, uyewo panguva 2017 nzombe run, nepamusika basa akasvika pedyo richisvika $1 tiririyoni.
Mukuwedzera, zvikumbiro blockchain varikukura. Izvi zvinosanganisira kuramba bvumidzwa manyemwe uye kudyidzana pamwe nemabhizimisi mhiri zvinenge sectors zvose zvebhizimisi. Kuwedzera Vhoriyamu patents ane chokukomborerwa guru wokugamuchirwa mune zvebhizimisi mabhizimisi.
Maererano nomushumo, anokosha sectors uchityaira blockchain mabhizimisi ukoshi vanosanganisira:
Banks uye mari nemasangano
Supply cheni uye logistics bhizimisi
Advertising uye vezvenhau nemakambani
Hurumende uye voruzhinji-chikamu nemasangano
Power uye simba Makambani
Retail uye e-zvokutengeserana
Software nyanzvi uye Developers
Telecom dzaishandisa uye MNOs
Interesting patents kuramba kupa nemamwe zvikumbiro mabikirwo. The mira vangatarira chaizvo yakasiyana 2030 mushure indasitiri yakavepo uye dzinokura. Izvi kushandura zvakawanda mabasa uye basa mhando kuti hatigoni kunotarisirwa mu 2018.
Kraken Daily Market Mushumo 02.08.2018
$108M nhumbi mhiri misika zvose nhasi